हिरो नंं. १ प्रदर्शनमा आयो, बढ्दैछ जय किशनको ढुकढुकी – Music Our Choice
काठमाडौं । नायक जय किशन बस्नेतले निर्देशन गरेको पछिल्लो चलचित्र हिरो नं. १ भोली २७ गते शुक्रबारदेखि देशब्यापी रुपमा प्रदर्शनमा आउन लागेको छ । यो चलचित्र उपत्यका भित्र र बाहिर गरी कुल ८५ वटा हलमा प्रदर्शनमा आउँन लागेको हो ।
नव गायक प्रवीण मोक्तानको पूर्बेलि लोक गीत”गुराँस फुल्यो…
१९ बैशाख २०७६, बिहीबार १०:३७
समाजसेवी गायक/संगीतकार सूर्य कमल राई जन्मदिनमा बाल आश्रम
३ असार २०७५, आईतवार १३:४७
मदन ताम्राकार कार्यकारी निर्माता तथा बिक्रम माङ्मु र बिशाल गुप्ता सह निर्माता रहेको यो चलचित्र हिरो नंं १ निर्माण क्रममा नै व्यापक चर्चा भएकोले पनि दर्शकहरुले रुचाउँनेमा विशेष तरिकाले हेरिएको छ । यस भन्दा अगाडी सार्वजनिक भएका गीत र ट्रेलर एवम अन्य प्रचार सामाग्रीमा दर्शकले दिएको सकारात्मक प्रतिक्रियाबाट पनि नायक एवम निर्देशक जय किशन बस्नेत हिरो नंं. १ सफल हुनेमा उत्साही देखिन्छन् ।
आफ्ना लागी भन्दा पनि दर्शकको मनोरञ्जनको लागी आफुले चलचित्र निर्माण गरेकोले चलचित्रलाई दर्शकको जिम्मामा छोड्दै चलचित्रको निर्माता तथा निर्देशक समेत रहेका नायक बस्नेतले हिरो नं. १ को स्लोगनमा “म रोए पनि मेरा दर्शक हाँसी रहुन्” भनेर राखेका छन् । चलचित्र व्यवसायिक रुपमा कतिको सफल बन्न सक्छ त्यो भने प्रदर्शनमा आउँनासाथ थाहा हुनेछ ।